Ndị na-emepụta ihe na ngwaahịa na ndị na-eweta ngwa ahịa - China Oge a na-eji ngwa rụpụta ụlọ ọrụ
Tower Air Multiplier Agụba Fan
2-na-1 ikuku purifier na ofufe na-ajụkwa gị ohere mgbe nzacha 99,79% nke allergens na emetọ. bladeless imewe dị mfe ọcha na mma maka kids.Cool onwe gị mgbe inwe udo nke uche na ya ikuku nyo. Bladeless ofufe na ọcha & nwoke ịga ụlọ ọgwụ ọrụ, ịfụ na iyo pụọ haze na nke a nkecha ofufe.
Na-agbagharị DC Fan
Ikuku mgbasa DC ofufe. BLDC brushless direct motor ugbu a, kọmpat imewe na ike ịzọpụta, ọ ga-atụkwasịkwara anwụnta ọgwụ ọchụ. Nine-ọsọ maka ikuku ọkọnọ. Swing na-akpaghị aka n'akụkụ akụkụ, elu na ala. Ogologo mgbanwe. 1-2-4-8H oge mgba ọkụ. 5 ọsọ mode: nkịtị, eke, ihi ụra, nne na nwa ebu n'afọ, ECO mode. Obere mkpọtụ na naanị 11dBA .Six mita ogologo ụzọ ikuku ọkọnọ.
Bladeless ụlọ elu ọcha ofufe
2-na-1 ikuku purifier ofufe cools gị ohere mgbe nzacha 99,79% nke allergens na emetọ. Bladeless imewe dị mfe ọcha na mma maka ụmụaka. Na-enweghị ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ahịhịa, ọ dị mfe karị ihichapụ iji onwe gị dị ọcha na ụlọ na ọfịs iji melite ogo ikuku. Na-enyere ndị na-ese siga aka iji belata mmetọ n'ime ikuku. Nwere ike inyere aka melite mgbaàmà nke ụkwara ume ọkụ na pollen allergies. Ọ dị mma maka ime ụlọ ụmụaka, ime ụlọ ime ụlọ na obere ọfịs ruo mita 30.
Mini Portable Air oyi
Mini obere ikuku oyi imewe na mmadụ abụọ-ofufe maka ike ifufe. O nwere ikuku ikuku dị okpukpu atọ. Super jụụ na-enye ume ọhụrụ na ice na mmiri, alụlụ-free humidifying ọrụ, atọhapụ-adịghị mma ion, iche iche mmiri tank, zere mmiri leakage. Ọ na - eme ka ahụ gị gwọọ mmiri wee kpoo ikuku dị jụụ iji mee ka ị ghara ịnọ n’ikuku ikuku ma nwee oge ọkọchị dị jụụ ma dịkwa ọhụrụ.